चना खानुका यस्ता छन् फाइदाहरु – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७७, २२ भाद्र सोमबार १५:२९
चनालाई हामीले तरकारी बनाएर पनि खान सक्छौ भने यसको दाल पनि खान सकिन्छ । यसलाई हामीले भुटेर पनि खान सक्छौ । चना नेपाली खानपिनको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो । यसमा कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, क्लाल्सियम, आइरन र भिटामिनको राम्रो स्रोत हो । जसले हामीलाई स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्छ । यी सबै विशेषताका कारण नै यसलाई गरिबको मेवा भनिन्छ । नियमित भिजाएको चना खानाले कमजोरी कम हुनुका साथै यसका अन्य फाइदा पनि छन् । चना हामी सबैले सुनेको र आफ्नो आहारमा प्रयोग गर्ने एक गेडागुडी हो । जसको सेवन अनेक तरिकाले गर्न सकिन्छ । तरकारी बनाएर, सातुको रुपमा, पानीमा भिजाएर काँचै खान सकिन्छ चना ।
चनाको दाल खादाका फाईदा यस्तो छ – चनाको दाल सेवन गर्नाले कब्जीयतको समस्या निर्मूल हुन्छ । यती मात्रै होइन जन्डिसका रोगीलाई पनि चनाको दालको सेवन धेरै फाइदाजनक हुन्छ । चनाको दालले कोलेस्ट्रोललाई कम गरेर तौल कम गर्न धेरै मद्धत गर्छ । यो पाचन प्रणालीको लागि धेरै नै लाभदायक छ । चनाको दाल जिंक, क्याल्सियम, प्रोटिन, फोलेट आदिले भरपुर हुन्छ जसले तपाईको शरिरलाई आवश्यक र जरुरी उर्जा प्रदान गर्छ । यसको अलावा यो पेटको समस्याको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ ।
चनाको दालले शरिरमा आइरनको कमीलाई पुरा गर्छ र हेमोग्लोबिनको स्तर बढाउन मद्धत गर्छ । यसमा अमिनो एसिड शरिरको कोषहरुलाई मजबुत गर्नमा मद्धत गर्छ । डायबिटिज नियन्त्रणको लागी चनाको दालको सेवन धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ । यसले ग्लुकोजको अत्याधिक मात्रालाई सोस्नपनि धेरै नै मद्धत गर्छ । सौन्दर्य बढाउनको लागि चनाको दालको बेसन अनुहारमा लगाउनाले लाभदायक हुन्छ ।
जानौँ, भिजाएको चना खानुका ८ फाइदा – स्वस्थ मुटु चनाले / कालेस्ट्रोललाई नियन्त्रणमा राख्छ । जसले गर्दा मुटु स्वस्थ रहन्छ र मुटु सम्बन्धी रोग लाग्ने खतरा पनि कम रहन्छ । चनाको नियमित सेवनले मुटुको धमनीहरुलाई खुलाउन र रगतको मात्रालाई बढाउनमा पनि मद्दत गर्छ । चनामा पाइने अल्फा लिनोलनिक एसिड र ओमेगा ३ आपसमा मिलेर कोरिनरी मुटु सम्बन्धी रोग र कार्डियो भास्कुर सम्बन्धी खतरालाई कम गर्छ । कब्जीयतमा राहत – भिजाएको चनामा पर्याप्त मात्रामा फाइबर हुन्छ । यसले पेटलाई सफा राख्नुका साथै पाचन तन्त्रलाई पनि राम्रो बनाउँछ । पिसाबको समस्या – भिजाएको चनामा गुड़ मिसाएर खानाले पटक–पटक पिसाब लाग्ने समस्यामा राहत हुन्छ । भिजाएको चना खानाले पाइल्सको समस्यामा पनि आराम दिलाउँछ ।
स्वस्थ छाला – भिजाएको चनामा नुन नहाली सादा चना चबाएर खानाले छाला स्वस्थ हुनुका साथै चम्किलो हुन्छ । साथै, छाला चिलाउने समस्या छ भने त्यसमा पनि राहत दिलाउँछ । तौल बढाउँछ – यदि तपाई चाहिने भन्दा बढी दुब्लो हुनुहुन्छ भने भिजाएको चना खानुस् । चनाले शरिरको तौल बढाउने काम पनि गर्छ । नियमित चना खानाले तौल बढ्नुका साथै मांसपेशी पनि
बलियो बनाउँछ । सर्दीमा राहत – चनाले शरीरको रोग प्रतिरोध क्षमतालाई बढाउँछ । जसले रुघाखोकी, सर्दी जस्ता समस्यामा राहत दिलाउँने काम पनि गर्छ । रगतको मात्रा पुरा – चना फलामको धेरै नै राम्रो स्रोत हो । यसले शरीरमा रगतको कमी छ भने त्यसलाई हटाउँछ । साथै रगतलाई सफा पनि गर्ने काम गर्छ ।
पुर्ण फाइदाका लागि कसरी खाने चना ? – एक मुट्ठी चना लिने तर त्यसलाई माटोको भाँडोमा सफा पानीमा राखेर रातभर भिज्न दिने । रात भर (करीब ९ घन्टा) चनालाई त्यस पानीमा भिज्न दिने । बिहान चनालाई पानीबाट निकालेर राम्रोसँग चबाएर खाने । त्यसपछि पानी पिउने । यसरी नियमित चना खानाले तपाईँ सँधै स्वस्थ रहनु हुन्छ । दैनिक भुटेको चना खाँदा शरिरलाई विभिन्न प्रकारका फाइदा हुन्छ । तरकारीका रुपमा र भिजाएको चना खाँदाका फाइदाबारेमा हामीले थाहा पायौँ । तर यसका अतिरिक्त चनालाई भुटेर खाएमा पनि यसको पौष्टिक गुणलाई थप उपयोगी बनाउँन सकिन्छ । भुटेको चना दैनिकरुपमा खाएमा हुने फाइदाहरु यस्ता छन् :
मोटोपना घटाउँछ चना – यदि तपाईं मोटोपनाका कारण चिन्तित हुनुहुन्छ भने भुटेको चना तपाईंका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । भुटेको चनामा क्यालोरीको मात्रा निकै कम हुन्छ जबकी यसमा विभिन्न पौष्टिक तत्व जस्तै पोटासियम, क्याल्सियम, आइरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, डाइट्री फाइबर भरपुर मात्रामा हुन्छ । सय ग्राम भुटेको चनामा १ सय ६४ क्यालोरी हुन्छ । यदि तपाईं खाजामा भुटेको चना खानुहुन्छ भने तपाईंको तौल निकै चाँडै घट्छ ।
तौल घटाउनका लागि कसरी खाने ? – तौल घटाउनका लागि चनाको प्रयोग निकै सजिलो छ । चनालाई एक घण्टाका लागि पानीमा भिजाएर राख्नुहोस् र यो सुकेपछि यसलाई बालुवा र नुनमा राखेर भुट्नुहोस् । तपाईंले बजारबाट भुटेको चना पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ । तपाईं चाहेको खण्डमा भुटेको चनामा सलाद जस्तै प्याज, गोलभेडा, गाजर, मुला, कागतीको रस आदि मिसाएर खानसक्नुहुन्छ । चनाले रगत बढाउँछ – चनामा आइरनको भरपुर मात्रा हुन्छ । त्यसकारण यदि तपाईंलाई रक्तअल्पत्ताको समस्या छ भने दैनिक भुटेको चना खान सुरु गर्नुहोस् । ध्यान दिनुहोस्, बोक्रा नभएको चनामा बोक्रा भएजत्तिको फाइदा हुँदैन । रक्तअल्पत्ताको शिकार धेरैजसो महिला हुने भएकाले यसले महिलालाई निकै फाइदा गर्छ ।
दिनभरी क्रियाशील रहनुहुनेछ – हामी सक्रिय रहनका लागि ऊर्जाको अत्यधिक आवश्यक पर्छ । यस्तोमा चनाले निकै सहयोग पुर्याउँछ । चना खाँदा ऊर्जा पाइन्छ । मधुमेह रोगीका लागि पनि चनाको सेवन निकै फाइदाजनक हुन्छ । डाइट्री फाइबरले भरिपूर्ण – फाइबर हाम्रो शरिरका लागि निकै आवश्यक हुन्छ । चना फाइबरले भरपुर हुन्छ त्यसकारण यसले पाचन क्रियालाई सुधार्छ । भुटेको चना खाँदा कब्जियतको समस्यामा फाइदा पुर्याउँछ ।
रहरकाे दाल र चना निकै गुणकारी, यसकाे फाइदा जानेर अचम्मित पर्नु हुनेछ – दालमा रहर उत्तम मानिन्छ । दिनहुँ उपयोग गरिने रहर दाल रातो र सेतो गरी दुई प्रकारको हुन्छ । रहर दालमा खनिज, कार्बोहाइड्रेट, आइरन, क्याल्सियम आदि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसमा २२ प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ । रहरको दाल बाथ, पित्त र कफ अर्थात् त्रिदोषनाशक हुने भएकोले सबैका लागि अनुकूल मानिन्छ । आयुर्वेदका अनुसार रहर रुखो, शीतल, हल्का, बाथकारक, कफ–पित्त र रगतको दोषलाई समाप्त पार्ने हुन्छ । पच्न सजिलो र शौच रोक्ने गुणसमेत हुन्छ । यो वायु उत्पादक हुन्छ । यसले शारीरिक अंगलाई सुन्दर बनाउँछ । रहर रगत, कफ र रगतसम्बन्धी विकार हटाउन उपयोगी मानिन्छ । रातो रहर हल्का, तीक्ष्ण र न्यानो मानिन्छ । यसले भोकसमेत बढाउँछ ।
रहरले कफ, विष, रगतको खराबी, लुतो, कुष्ठ र पेटमा भएको कीरा हटाउँछ । यो दाल पाचकसमेत हो । धेरै सजिलै पच्ने भएकोले यो दाल बिरामीलाई समेत दिइन्छ । पाइल्स, ज्वरोमा यो दालको उपयोग लाभकारी मानिन्छ । अर्कातिर, चना शरीरमा तागत उत्पन्न गर्ने, भोजनमा रुचि पैदा गर्ने मानिन्छ । आयुर्वेदका अनुसार यो न्यानो प्रकृतिको हुन्छ । चनाले शरीरलाइ तरोताजा राख्ने गर्छ । रगतमा जोस उत्पन्न गर्छ । यो कलेजोका लागि समेत लाभदायक मानिन्छ । यसले रगत सफा गर्छ, धातु बढाउँछ र आवाज सफा पार्छ । रगतसम्बन्धी विकार हटाउन लाभदायक मानिन्छ । यसले पिसाब खोल्छ । चना मुख्यत: किशोर र शारीरिक मिहिनेत गर्नेहरूका लागि पौष्टिक खाजा हो ।
चना भिजाएर वा अंकुरित गरी नियमित बिहान सेवनले शरीर स्फूर्तिवान् र शक्तिशाली हुन्छ । अंकुरित चना खानुका धेरै फाइदा छन् । अंकुरित चनाले धातुलाई पुष्ट, मांसपेशीलाई सुदृढ र शरीरलाई बज्रजस्तै कठोर बनाउने प्राचीन मान्यता छ । यसको सेवन छालाको रोगमा समेत लाभदायक मानिन्छ । अंकुरित चनाको सेवनले फोक्सो बलियो बनाउने मान्यतासमेत छ । कब्जियतको समस्या भएकाहरूको लागि अंकुरित चना राम्रो मानिन्छ । भिटामिन ‘सी’ को मात्रा बढी हुने भएकाले चनाले तौल बढाउँछ । यसले रगत वृद्घि गर्नुका साथै सफासमेत गर्छ । रगतमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा कम गरेर मुटुको रोग हटाउनसमेत चना सहयोगी मानिन्छ । बालबालिकालाई महँगो बदामको सट्टा कालो चना खुवाउनाले उनीहरू स्वस्थ हुन्छन् ।
विवाहपछि धेरैजसो महिलाहरुलाई हुन्छ यी ५ कुराको पछुतो, हेर्नुहोस्
विवाहपछि चम्किन्छ यी राशी हुने व्यक्तिको भाग्य, न तपाईंको त परेन ?
PREVIOUS Previous post: बैतडीमा भदौ ८ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा केही खुकुलो पारेर भदौ ३१ गतेसम्म लम्बियो
NEXT Next post: नेपालको पर्यटकीय प्रचारप्रसार भएपछि बहराइनको राजपरिवार नेपाल घुम्न लालायित